सर्वोच्चले किन गर्‍यो फेरि जग्गा प्लटिङ फुकुवा ? - Deshko News Deshko News सर्वोच्चले किन गर्‍यो फेरि जग्गा प्लटिङ फुकुवा ? - Deshko News
सर्वोच्चले किन गर्‍यो फेरि जग्गा प्लटिङ फुकुवा ?
प्रमुख मालपोत अधिकृत पद्यनिधि सोतीका अनुसार उपत्यका सहरी विकास प्राधिकरण उपत्यकामा चार स्याटेलाइट सिटी निर्धारण गरी त्यसभित्र आठ आनाभन्दा थोरै जग्गा कित्ताकाट गर्न रोक लगाइसकेको थियो। मन्त्री उपत्यकाबाहिर भएका कारण कार्यालयलाई सर्कुलर गर्न केही ढिलो भएको भूमिसुधार तथा व्यवस्था सचिव कृष्ण देवकोटाले बताए। बिहीबारैदेखि रोक्का फुकुवा हुनेछ। सर्वोच्चको आदेशानुसार तत्कालका लागि फुकुवा गर्नुपर्ने भए पनि कृषियोग्य जग्गाको प्लटिङ रोकिछाड्ने तयारीमा मन्त्रालय छ।
प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको इजलासले भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयलाई छलफलमा नबोलाई अन्तरिम आदेश दिएका हुन्। यसैले मन्त्रालय उक्त आदेश निस्तेज (भ्याकेट) को प्रक्रियामा जानेछ। आदेश दिँदा अदालतले संविधान प्रदत्त निजी सम्पत्ति बेचबिखन गर्न पाउने अधिकार तथा भूउपयोग ऐन जारी नभएकालाई कारण देखाइएको छ।
अहिले भूउपयोग नीतिअनुसार कृषियोग्य जग्गाको प्लटिङ रोकिएको थियो। मन्त्रालय यथाशीघ्र भूउपयोग ऐनको तयारीमा पनि छ। भूउपयोग ऐन जारी भएपछि जग्गाको कित्ता नम्बर भए त्यो जग्गा कुन खालको हो भन्ने डिजिटल माध्यमबाटै पत्ता लगाउन सकिन्छ। ‘रोक्का कार्यान्वयन हुँदा तराई र ग्रामीण भेगमा त जग्गाधनी मालपोतका कर्मचारीलाई कुट्नै खोजे भन्ने कुरा आयो, सचिवले भने, ‘तर उपत्यकालगायत सहरमा खासै गुनासो आएन।’ अाजकाे अन्नपूर्णमा खबर छ ।